Antonia no sakaizan'i Leonard akaiky indrindra. Fa ny azy dia antsoin'ny olona rehetra hoe Toni, izay indraindray miteraka fikorontanana satria maro ny olona mihevitra fa zazalahy i Toni. Leonard dia antsoin'ny olona rehetra fa Leo. Bibidia toy ny liona izy matetika. Ny taranja fanatanjahantena sy tantara no lohahevitra tiany indrindra, ary tsy dia mendrika loatra izy.
Mampihomehy fitsangatsanganana fotoana fandokoana
Episode 5 - Fetin'ny fahaleovan-tena
Azafady mba ampahafantaro anay ny tianao ny andian-tantara an-tsary. Manana hevitra amin'ny dia vaovao mandritra ny fotoana ve ianao? Sa sosokevitra amin'ny famolavolana tantara an-tsary? Aza misalasala mifandray aminay.